ICloud + privacy dia tsy ho hita any amin'ny firenena sasany | Avy amin'ny mac aho
Toy ny mahazatra, amin'ny fampisehoana izay maharitra maharitra adiny roa, Tim Cook ary ny ekipany dia tsy afaka manazava amin'ny volo sy manao sonia ny vaovao rehetra izay hampidirina anaty rindrambaiko samihafa amin'ireo fitaovana rehetra izay havaozina amin'ity taona ity.
Ka mila miandry isika hamaky ny printy tsara an'ny tsirairay amin'izy ireo mba hahazoany hevitra lalindalina kokoa amin'ny asa vaovao tsirairay, miaraka amin'ny lafy tsarany sy lafy ratsy. Amin'izao fotoana izao, ao amin'ireo "taratasy kely" ireo dia efa nisy zavatra hafahafa hita: nambara ho an'ny fampielezam-peo tsy miankina iCloud + tsy ho hita any amin'ny firenena sasany ...
Apple dia nanambara omaly tamin'ny teny ifotoran'ny WWDC21 serivisy fisoratana anarana iCloud + vaovao. Ny iray amin'ireo mampiavaka an'io serivisy vaovao io dia ny fampiasana teknolojia fampitaovana tsy miankina iray izay manampy amin'ny fanafenana ny fitetezana tranonkala an'ny mpampiasa. Tao anaty fanambarana an Reuters, Apple dia nanamafy fa ity fampiasa ity dia tsy ho hita amin'ny firenena sasany, anisan'izany i Shina.
Nanamafy ny orinasa fa «Fampitàna mivantana»Tsy ho hita any Chine rehefa avoaka amin'ny besinimaro amin'ny faran'ity taona ity. Tsy ho hita ao Belarus, Colombia, Egypt, Kazakhstan, Saudi Arabia, Africa South, Turkmenistan, Uganda, ary Philippines koa izany. Apple dia manondro ireo fetra ireo amin'ny antony ara-dalàna mifehy ny governemanta isam-pirenena.
«Relay manokana» (Famerenana amin'ny laoniny manokana) dia endri-javatra natao hanomezana ny mpampiasa sehatra hafa amin'ny fiainana manokana rehefa mizaha tranonkala. Rafitra iray mitovy amin'ilay ampiasain'ny VPN.
Nanazava i Apple fa rehefa mivezivezy amin'ny Safari Amin'ny rindranasa ho avy, "Private Relay" dia hiantoka ny fifamoivoizana rehetra mandao ny fitaovan'ny mpampiasa ho voahary, mba tsy hisy olona eo anelanelan'ny mpampiasa sy ny vohikala hitsidika azy hiditra sy hamaky azy io, na ny Apple na ny tamba-jotra mpampiasa mpamatsy aza. Ny fangatahan'ny mpampiasa rehetra dia halefa amin'ny alàlan'ny fampitaovana internet roa misaraka.
Ny voalohany dia hanendry ny mpampiasa a adiresy IP tsy fantatra anarana miankina amin'ny faritra misy anao fa tsy ny tena toerana misy anao. Ny faharoa dia mamoaka ny adiresy tranonkala tadiavin'izy ireo ary mampita azy ireo any amin'izay alehany. Miaro ny tsiambaratelon'ny mpampiasa ity fisarahana fampahalalana ity satria tsy misy fikambanana afaka mamantatra hoe iza ny mpampiasa ary tranonkala iza no tsidihiny.
Ny relay voalohany dia alefa amin'ny alàlan'ny a paoma mpizara, ary ny faharoa a mpandraharaha ivelanyaraka Reuters. Tsy mbola nilaza i Apple hoe iza no mpitatitra antoko fahatelo ampiasainy, saingy nilaza i Reuters fa hampiseho ny antsipiriany io orinasa io avy eo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » ICloud + Private Relay dia tsy ho hita any amin'ny firenena sasany